Mareykanka oo canshuur dheeraad ah saaraya badeecadaha dalka China – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in canshuuro dheeraad ah la saaro alaabaha China u dhoofiso Mareykanka, sida warbaahinta gudaha ay sheegtay.
Canshuurtan ayaa la fileyaa in ay gaarto $200bn kuwaas oo saari doona badeecadaha dalka China u iib-geeyo Mareykanka, waxaana kamid ah qalabka electornic iyo alaabo kale.
Madaxweyne Trump, ayaa shaqalaha waaxda ganacsiga ku amray in ay diyaariyaan taarifooyin cusub oo xagaagan lagu soo rogo dalka China, taas oo xiisadda ganacsi ee u dhexeysa Washington iyo Beijing sii xumeyn karta, waxa uu Mareykanka ugu yeeray ganacsi aan cadaalad aheyd.
Saraakiisha ayaa wali ku howlan diyaarinta liista badeecadaha taarifada cusub la saari doono. Hase ahaatee lama sheegin waqtiga rasmi ah ee canshuurta dhaqan geli doonto.
Tarifooyinka cusub ee haatan la soo rogay ayaa ku biiri doonto tii kal hore Mareykanka uu saaray badeecadaha China oo gaaraysay $50bn, iyadoo dalka China uu ku jawaabay talaabo taa lamid ah.
7 bishan, Mr Trump ayaa sheegay in $200bn oo canshuur ah la saaray badeecadaha China isla markaana $267bn oo dheeraad ah lagu kordhin doono waqti gaaban gudahiis haddii loo baahdo.
Wada hadalo ayaa jiray oo arintan lagu xalinayo, laakiin khamiistoo ayuu Madaxweyne Trump sheegay in Mareykanka aan cadaadis lagu saari karin sidii heshiis loo gaari lahaa.
Maamulka Jubbaland oo mamnuucay in shirar loo aado goobaha Shabaabku joogaan